ARIN MURUGO IYO CALOOL XUMO:Hooyo Soomaaliyeed oo 4 Teeda Caruur Ku Weysey Qaraxyada Muqdisho – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaARIN MURUGO IYO CALOOL XUMO:Hooyo Soomaaliyeed oo 4 Teeda Caruur Ku Weysey Qaraxyada Muqdisho
July 30, 2019 marqaan Faalloyinka, Wararka maanta 1
Ruqiyo Xasan Ibraahim, ma ahan magaca saxda ah ee Hooyada aan warbixintaan ka qoreyno, waxaana qarinay magaceeda runta ah, codkeeda iyo sawirkeeda sababo amnigeeda la xariira.
Waxay ku nooshahay magaalada Muqdisho balse markeedii hore waxay ka timid gobalka Hiiraan ee Soomaaliya sida ay noo sheegtay kadib markii aan ku booqanay gurigeeda oo ku yaalo Xaafad katirsan Muqdisho
Hooyo Ruqiyo Xasan, waxa uu Alle siiyay 4 Canug oo isugu jira 3 Wiil iyo hal gabar balse maanta midna ugama noola carruurtaas waxayna dhamaantood ku baxeen gacanta Al-Shabaab.
Marxuumka oo aan magaciisa qarinay ayaa ka tirsanaa Arday dhameestay waxbarashada dugsiga sare oo rajo ka qabay inuu guul gaarsiiyo qoyskiisa oo sabool ah, sidoo kalane agoon ah. Nasiib darro rajadii wiilka iyo hamigii hooyo halkaas ayey ku bur bureen.
Hooyo Ruqiyo murugada iyo Xanuunka halkaas ugama dhamaanin hadane waxay wiil kale oo yaraanka qoyska ahaa ay ku waysay Qaraxii Zoobe isagoo caawiye ka ahaa goob shaqo oo halkaasi ku taallo. Ma aysan arkin meydka wiilkeeda waxa uuna katirsanaa dad badan oo la waayay, balse waxay aamintay in uu dhintay.
Hooyo Ruqiyo waxay sidoo kale weerar kale oo ka dhacay Saldhigga Waabiri ku waysay Gabadha kaliya ee qabtay waxa uuna qarax haleelay iyadoo saaran gaari Caasi ah oo halkaasi marayay. Dhaawac daran oo soo gaaray Gabadha ayey markii dambe u geeriyootay.
Wiilkeedii ugu dambeeyay oo Bajaajle ah ayey Hooyo Ruqiyo ku waysay weerarkii ugu dambeeyay oo ay Al-Shabaab ku soo qaadeen Barta Kontaroolka ee Sayidka lagana ilaaliyo Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya.
Ma jirto murugo ka wayn iyo xanuun ka daran in 4-tii Canug ee Alle ku siiyay maalinba mid soo aasto islamarkaana aadnan garaneyn sababta lagaaga dilay. Sidoo kalane aadnan qabsan karin qofkii kaa dilay.
Al-Shabaab oo ah koox ka been sheegta Diinta Islaamka ayaa si ba’an u laysa dadka marasta ah oo aan dembi ah ka gelin mana jirto dhaq dhaqaaq guud oo dalka ka socda islamarkaana lagu soo afjarayo maleeshiyada Al-Shabaab.
Hooyo Ruqiyo Xasan, oo ah qof samir badan kuna xiran Alle ayaa noo sheegtay in aysan dooneyn in ay ka soo muuqato Warbaahinta balse markii dambe ayey naga ogolaatay in aan Warbixinteeda qorno annag oo qarineyna magaceeda.
Hadda waa kaligeed, Afartii Carruur midba maalin ayey soo aastay halka hore-na uu ka dhintay Seygeeda kadib Xanuuno ku dhacay. Wixii markaas ka dambeeyay ma aysan guursan balse waxay dhabarka u xiratay in ay Carruurteeda korsato markii ay ku nasan laheydna Al-Shabaab ayaa gablan ka dhigay.
Waxay noo sheegtay Hooyo Ruqiyo, in maalmaha soo socda ay ku wajahan magaalada Kuala Lumpur ee Xarunta Dalka Malaysia waxayna ka sii aadi doonta Dalka UK sida ay noo sheegtay.
DAAWO VIDEO:Soomaliland oo Cor Caare u Diraysa Cali Khaliif Inuu Lasoo Hadlo,Soomaliland Kusoo Celiyo
July 24, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka maanta 0
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxeya qarax is miidaamin ah oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay hoolka Shirarka xarunta maamulka Gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho kaas oo uu ka [Read More]
Dhibaato.. waa arin murugo leh.